Abakhiqizi bamakhadi e-PVC - Amakhadi e-China PVC abahlinzeki & Ifektri
Ingqondo inezibunji ezahlukahlukene ezingaphezu kuka-500 (ezinokuma okuhlukile / usayizi) wekhadi le-PVC elingavamile futhi singenza noma yisiphi isayizi eyenziwe ngezifiso, ubukhulu nokuma ngokuya ngomdwebo wamakhasimende.
Ikhadi lesipho luhlobo lwekhadi elihlakaniphile. Iqukethe i-chip ne-induction antenna. I-chip ne-induction antenna zifakwe ekhadini. Ikhadi lenziwe nge-PVC ejwayelekile, i-ABS, isilwane nezinye izinto, ngaphandle kwengxenye eveziwe.
Ikhadi likamazisi elenziwe ngezifiso lenziwe ngezinto ezibonakalayo ze-PVC eziyi-100% futhi lilandela i-ISO 7816 yamazwe omhlaba jikelele.
Ikhadi le-pvc lephrinta ye-Inkjet
AMAKHODI we-MIND Inkjet PVC ane-nano-coating ekhethekile ebusweni, angakwazi ukwenza inki. Ngakho-ke, ingaphrinta kuphrinta ye-inkjet efana ne-Epson, iphrinta yeCanon.Yonga izindleko zokuphrinta futhi amakhasimende asikho isidingo sokuthenga ukuphrinta kwekhadi le-ID elibiza ngokwehlukana.
Ikhadi le-Mind Loyalty, ikhadi lobulungu, ikhadi le-VIP lenziwe kakhulu ngezinto eziyi-100% ezintsha ze-PVC futhi lilandela i-ISO 7816 yamazwe omhlaba jikelele. I-Barcode, ikhodi ye-QR, umugqa kazibuthe, ukuphrinta kwezokuphepha kungenziwa ngezifiso futhi sinikeza izinketho eziningi zokwenza kube ngokwakho.
Ikhadi lemigqa kazibuthe
Ikhadi le-Mind Magnetic stripe lilandela i-ISO 7816 yamazwe omhlaba jikelele.Umugqa uqukethe amathrekhi amathathu noma amathrekhi ama-2, kungaba imibala emnyama / empunga / yegolide / yesiliva. Kungarekhodwa ngezinhlamvu ze-alphanumeric.